Lawo oo soo saartay digniino waaweyn oo ku saabsan BVE2019! - 2019 NAB Muujinta Warar by Broadcast Beat. Wargeyska rasmiga ah ee NAB Show, Soo-saaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » Lawo oo soo saartay digniino waaweyn oo ku saabsan BVE2019!
Lawo oo soo saartay digniino waaweyn oo ku saabsan BVE2019!
Lawo, Jarmalka jarmalka iyo soo saaraha shabakadda IP-ga, kantaroolka, tiknoolajiyada iyo fiidiyowga loogu talagalay war-baahinta, studio iyo farshaxanka, ayaa doortay 2019 BVE Muuji sida moobiilka kale ee sii daaya ee badeecadaha IP-ga, iyaga oo intaa ku daray farsamooyinka IP-ga ee dhamaystiran. Waxyaabaha cusub ee la isku daro ee soo-saarka soo-saarka fog-fog ayaa lagu marti-qaadayaa in ay la kulmaan Xarunta BVE #J30. Intaas waxaa sii dheer, oo ay weheliso bilawga soo saaridda, Lawo ayaa soo bandhigi doona wararka muhiimka ah ee shirkadaha. Taariikhda la bilaabayo waa Talaado, Febraayo 26, 2019 at 12 (duhurka).
Qalabkan wuxuu ka kooban yahay dhinaca qalabka fog ee Mashiinka Mashiinka Maqalka ah ee Cortex-ka, Isku-xirka WAN-awood A__line AoIP, iyo xalka V-ramote4-ku-talinta IP-ka. Marka la eego dhinaca soo saarista, Lawo waxay muujinaysaa barnaamijka V2-ka ee IP-Routing, Processing & Multi-Viewing platform, SMART Monitoring System iyo Iskuxirka Telemetry ee Shabakadaha Daabacaadda iyo casriga cusub ee mc²56 3rd Generation oo ay ka mid yihiin A__UHD Core Xadka Cunto-sare, qeexay qalabka DSP ee maqalka. Waxaa intaa dheer, qaabeynta waxaa ka mid ah KICK, Bundesliga-ansixiyay isku-darka isku dhafan ee isku-dhafan ee isku dhafka kubadda.
The Nidaamka deegaanka wuxuu ku salaysan yahay awood wax-ku-ool ah oo farsamo leh oo FPGA-ku salaysan kaas oo ku xiran nidaamyada loo yaqaan "Virtual Modules (VM)" software-ka loo yaqaan 'VM' si loo abuuro shaqooyinka loo baahan yahay. Noocyada VM-yada waxaa ka mid ah vm_dmv64-4 - 1stka xNUMXstka dhabta ah ee farsameysan ee IP-ga ah ee farsameysan iyo xawaaladda vm__UDX - 4K. Xuduudo badan ayaa ku xiran 40GE (ama 4x10GE) Isku-xirka Ethernet ee shabakadda IP-yada si loo sameeyo habka loo qaybiyo IP-ga iyo habka wax-qabadka ee bixiya qaab-sax ah oo nadiif ah oo isbeddel leh sida matoor matoor ah.
Lawoqaybta SMART waxaa ka mid ah Monitoring System smartDASH iyo Realtime Telemetry, shirkad ganacsi ah oo iibisa shirkadaha ganacsiga ee shabakada iyo warbaahinta oo dhan oo dhan IP-ga, dhamaan SDI ama dhexdhexaadinta kaabayaasha WAN / LAN iyo shabakada smartSCECE Baaritaanka Deep Packet & Network Analyzer, warbaahinta-agnostic, falanqaynta 24 / 7 mashiinka IP ee ku duuban wax soo saarka iyo dhalida.
Mc²56 cusub (3rd Generation) ayaa la fududeeyay habka wax soo saarka IP-video ee maanta - bixinta Lawo'Revolution of thumbnail' Revolution of the Revolution of the Revolution of the Islamic Revival Party (NNP) SMPTE 2110, AES67 / RAVENNA, DANTE iyo MADI sounds.
A__UHD Core waa shabakad ku salaysan shabakad, oo ah barnaamijka qalabka DSP ee dhawaaqa; Mashruuca 1,000 si buuxda u shaqeeya mc² DSP Channels ayaa loo isticmaali karaa miisaan keliya oo mcx ah oo lagu maareynayo xitaa wax soo saarka ugu dhibta badan ama la wadaago ilaa afar qunsuliyado. Isku-xirka Shabakada SOMALO / 10GbE oo ah sideed madaxbannaan oo leh SFP waxay awood u leeyihiin inay isticmaalaan shabakado aan caan aheyn iyada oo loo marayo ST1-2022 isbedel aan iloobi karin (SPS). Awoodda shabakada A__UHD ee guud ee I / O waxay u dhigantaa 7 40,000kHz / 48bit. Maareynta mulkiiluhu wuxuu bixiyaa labo maareyn maaraynta RJ24 45GbE.
The Power CoreRP waa batari IP Audio I / O & DSP oo leh farshaxan fog-fog ee Wan-awood-siinta, kaas oo siinaya wax-qabadka cod-bixinta oo yar-yar oo qarsoodi ah oo la socota kormeerka iyo IFB isku-darka. Qalabka 1RU ee xoogga leh wuxuu ka kooban yahay 48 habka loo shaqeeyo, waxayna u saamaxdaa kumbuyuutarka qalabka fog (dhammaan Gain, Fader, Mute, EQ, Dynamics, Heerka Heerka Heerka, iwm.) Laga bilaabo mc² consoles. Maareynta GUI-kumbuyuutarka ee la taaban karo waxay u adeegtaa hawlgal dheeraad ah iyo hawlgal fog. Awoodda CoreRP waxay bixisaa khadka shabakada xiriirka ah SMPTE 2022-7 Beddelidda Ilaalinta Dhamaan.
KICK waa tignoolajiyada kubbadeedka kubbadeedka kubbadda ee kubbada codka ah ee kubadda cagta sida kubadda cagta, rugby iyo kubadda cagta Mareykanka. Nidaamku wuxuu bixiyaa codad hufan oo 'fiican' oo loo yaqaan 'lick-to-noise', oo si weyn u yareynaya buuqa dad badan. Waxa kale oo ay xaqiijisaa heerka maqalka ee joogtada ah iyada oo aan la ogaan karin oo aan la ogaan karin oo ah isku-dar la'aanta isku-dhafan, bixinta isku-dhafka 100% oo lagu celin karo cayaaraha si aad uhesho xitaa ka dib daqiiqadaha 90. Xiriirka kubadda cagta ee Bundesliga, DFL (Xiriirka Kubadda Cagta Germany) ee Sportcast ayaa isticmaalaya KICK wax soo saarka cayaaraha tan iyo xilli ciyaareedkii 2017 / 2018 si ay ula socdaan ciyaartoyda si toos ah u xakameynaya microfones kuwaas oo rikoodhka ka ciyaara garoonka iyo Isku dhejinta codka - oo leh dhagaystayaasha tv-ga oo ku raaxeysta gabi ahaanba cusub iyo "dhaw-u-cayaara" cod.
Lawo naqshadeynta iyo soo saarida shabakada shabakada, xakameynta, farsamada iyo farsamoyinka fiidiyowga ee warbaahinta iyo soo saarida boostada, iyo sidoo kale qaab nololeedka iyo codsiyada masraxa. Waxyaabaha ay ka mid yihiin nidaamyada kormeerka iyo kormeerka, qalabka kombiyuutarka ee isku dhafan, codbixiyayaasha, qalabka farsamada iyo sidoo kale xalalka IP-ku salaysan ee A / V iyo nidaamyada habraaca. Dhammaan alaabooyinka waxaa lagu horumariyaa Jarmalka waxaana lagu soo saaraa heerarka tayada ugu sareysa ee shirkadda oo ku taal magaalada dooxada Rhine ee Rastatt, Jarmalka. Macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo shirkadda internetka www.lawo.com.
2019 #NABShow Muuqaal Muuqaal: Diyaarinta Furaha - March 22, 2019
2019 #NABShow: Robot, Waxaad Jiidi kartaa Gawaarideyda - March 19, 2019
2019 #NABShow: ATSC 3.0 Adageynta Dunida - March 15, 2019
Broadcast Engineer Broadcast Engineering CES2017 Kaalinta Graham Chapman Prmoted toEditor MStar wax soo saarka post SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Fiilooyinka TV Technology Ultra HD Forum Video Engineer	2019-02-18
Previous: LIVE WEBINAR - MARKO 26: Caqabadaha Hagaajinta Jilayaasha Jilayaasha Wax-soosaar la'aanta Video-ga ah
Next: The Washington Post ee Calaamadaha Daabacaadda Ark ee Graham Media Group
2019 # NABshoobka Fadhiga Diyaariyeyaasha: La soco Warqada
Kooxda Maalgashiga Virgo waxay ku dhawaaqday $ 10 Million Investment in Bartan Xarun
NAB LIVE LIVE - Jadwalka Bandhigga 2019
2019 #NABShow: Robot, Waxaad Jiidi kartaa Gawaarideyda
10 Waxyaabaha Duulimaadka Diyaargarow kasta waa inay ogaadaan qaybta 107